Kedu ihe kpatara Jamaica na St. Kitts ka ji dị mma ileta?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Kedu ihe kpatara Jamaica na St. Kitts ka ji dị mma ileta?
Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Safety • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onweghi onye nwuru na St. Kitts na COVID. Na Jamaica mmadụ 350 nwụrụ. Ọ pụtara na Jamaica enweghị nsogbu ọ bụla? Ọ bụchaghị.
Jamaica ka bụ igwe ma e jiri ya tụnyere ọnụọgụ ndị edere na United States, Canada ma ọ bụ UK Gịnị kpatara Canada ji kwụsị ụgbọ elu? Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica Edmund Bartlett nwere nzaghachi ma nwee mmesi ike maka Canada na-eme mkpebi dị otu a
Jamaica dekọtara 5273 COVID-ikpe 19 kwa nde, St Kitts naanị 693.
Jamaica ruru ụmụ amaala 3 nde, St. Kitts nwere ihe na-erughị 54,000.
Na Jamaica, njem emepere emepe ma dịkwa ọnụ ala n'oge ọrịa na-efe efe, na St Kitts mgbochi ebe a na-enye ohere maka njem naanị maka ndị dị njikere ịnọ izu ma dị njikere iji nnukwu ego mee ya.
Ọ pụtara na Jamaica enweghị nsogbu ọ bụla? Ọ bụchaghị.
N'iji ya tụnyere, United States dekọtara okwu 80,485 kwa nde na 1359 kwa nde mmadụ nwụrụ na US. Ọ na-eme ka ndị US karịa 15 ugboro dị ize ndụ karịa njem karịa Jamaica.
Hawaii nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ala nke COVID-19 na United States ma dekọọ okwu 18259 kwa nde. Ọ na-eme ka Hawaii 3 1/2 dịkwuo ize ndụ maka ndị ọbịa karịa Jamaica.
Na Canada mmadụ 20,512 n’ime ha bu nje ahụ ma mmadụ 528 n’ime ha nwụrụ.
Otu njimara dị mkpa karị bụ United Kingdom na-ebute ọrịa 56,057 na otu nde mmadụ na 1,559 nwụrụ.
Maka ihe doro anya: Ntụle a gbakwasara otu nde mmadụ. Ọ baghị uru iji ọnụ ọgụgụ tụnyere nọmba ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ndị bi na obodo nwere naanị puku iri ise. St. Kitts nwere naanị ụmụ amaala 50,000. Mpempe akwụkwọ 53,418 kwa nde na St. Kitts tụgharịrị bụrụ naanị okwu 693, n'ime nke iri atọ na ise natara. Maka Jamaica okwu 37 kwa nde pụtara 35 ikpe nke 5,273 natara.
N'ileba anya na ọnụ ọgụgụ dị mwute dị otú a, Jamaica na St. Kitts na ọtụtụ mba Caribbean ka nọ na-adị nchebe nke ukwuu ma yie ka ọ bụ ụzọ mgbapụ magburu onwe ya maka ndị chọrọ ịgbanahụ nje ahụ.
Jamaica na-eme ka ọ dịkwuo ọnụ ma dịkwa mfe, St. Kitts na-eme ka o sie ike ma ọ naghị ewe ohere. Mụ na Anguilla, St. Kitts ka bụ Coronavirus nwụrụ anwụ n'efu wee sonye n'ọkwa sọọsọ mba ole na ole n'ụwa niile n'otu otu egwuregwu.
Jamaica na njem ya na-eme njem na njem nlegharị anya na ọtụtụ ndị ọbịa na-anọgide na-abụ ihe atụ na-enwu gbaa nke otu mba agwaetiti nwere onwe ya nwere ike isi jiri uru nke ọnọdụ agwaetiti na gọọmentị nweere onwe ya iji kwado azụmahịa azụmahịa. Jamaica nwere nnukwu ebe ntụrụndụ niile nwere ike ịpụ iche, dịka akpụkpọ ụkwụ or Osimiri ntụrụndụ ka na-emeghe. Ọ na - akọwa ihe kpatara Jamaica ji bụrụ ọkwa dị n'ihu ọrịa ahụ.
Hon. Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Edmund Bartlett si Jamaica abụrụla onye nwere ikike na mba ụwa n'ọgụ iji mee ka njem nleta meghee site n'oge agaghị ekwe omume. Canadas kpebiri ịkwụsị ụgbọ elu na Mexico na Caribbeanbean izu gara aga ga-abụrịrị ihe gbawara mpaghara nke gbalịsiri ike iji nọgide na-anabata ndị ọbịa, nchekwa, ma na-achọsi ike ndị njem nleta. Bartlett nwere azịza nye Canada ma na-ekwu ya na ajụjụ ọnụ eTN.
Na mgbakwunye na onye ozi Jamaica, Maazị Kayode Sutton na-ekwu okwu site n'ọmarịcha ebe akpọpụrụ iche na St. Kitts, ndị St.lọ nkwari akụ Royal St.. Kayode laghachiri agwaetiti ya na nso nso a mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Jamaica. Ọ na-akọwa usoro ọ gafere. Ọ sị, "A nọ m n'ụlọ, mana ebe dị anya n'ụlọ".
Na St. Kitts, onye njem ọ bụla chọrọ ịnọ n'otu ụlọ nkwari akụ akwadoro maka "Ezumike na Ọnọdụ", nwere ịgbaso iwu siri ike
Enwere ike ịchọta ụkpụrụ Jamaicas na Gaa na weebụsaịtị Jamaica.